Mareykanka oo tirakoob kasoo saaray duqeymihii ay ciidamadiisu ka geysteen caalamka Islaamka.
Thursday January 20, 2022 - 09:56:23
Diyaarad nuuceedu yahay B52 oo dab rid ku sameynaysa gobolka Nevada,Sept. 14, 2007
Wasaaradda Gaashaandhigga dowladda Mareykanka ayaa soo saartay warbixin ku saabsan duqeymaha laayaanka ah ee ciidamadeeda cirka ay sanaddii 2021 ka geysteen qaar kamid ah dalalka caalamka Islaamka.
Sida warbixinta ka muuqata maamulka Biden ayaa hoos udhigay weerarada xagga cirka ah marka loo eego xilligii Trump balse Mareykanku wali kama joogsan in uu xasuuq ku hayo shucuubta muslimka ah.
Sanaddii lasoo dhaafay ayuu Mareykanku 696 duqeyn ka geystay dalka Afghanistan, Soomaaliya wuxuu ka geystay 10 weerar oo xagga cirka ah sida ku cad bayaanka kasoo baxay wasaaradda Difaaca.
Dalka ugu badan ee ciidanka cirka USA ay duqeymaha ka geysteen waa Afghanistan waxaana xiga Ciraaq iyo Suuriya oo ay ka dhaceen 146 weerar oo xagga cirka ah.
Sida warbixinta ku cad sanadkii tagay dalka Yemen kama dhicin wax duqeymo ah, isku geyn tirada weerarada xagga cirka ee Mareykanku uu ka fuliyay caalamka Islaamka sanaddii 2021 ayaa gaartay 852 duqeyn halka sanaddii 2020 ay duqeymuhu ka badnaayeen 1,469 weerar.
Waxaa xusid mudan in warbixinta kasoo baxday Pentagon-ka aan marnaba lagusoo hadal qaadin khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dadka shacabka ah kasoo gaaray duqeymihii laayaanka ahaa ee ka dhacay wadamada caalamka Islaamka.
Xasuuqa ugu daran ayuu Mareykanku ka geystay wadanka Afghanistan halkaas oo uu ku dilay boqolaal ruux, sidoo kale wadamada Suuriya iyo Ciraaq ayuu ku laayay dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
Hay'adaha sheegta in ay udoodaan xuquuqul insaanka ayaa aaminsan in warbixinta kasoo baxday Mareykanka aysan aheyn mid lagu qanci karo islamarkaana ay jiraan duqeymo dad rayid ah lagu waxyeelleeyay oo uu qarinayo.
Dowladda Mareykanka oo ka hadashay dagaalka markale ka dhaxqarxay Amxaarada iyo Tigreega.